Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyadii Ugu Dambeeyay Ee Ogadenia Kadhacay.
Tacadiyadii Ugu Dambeeyay Ee Ogadenia Kadhacay.
Posted by Dulmane	/ December 31, 2016
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo fara badan oo ciidanka wayaanuhu ugaysteen shacabka S.ogadenia.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in ay ciidanka gumaysigu sare uqaadeen tacadiyadii ay kuhayeen dadka shacabka ah waxayna tacadiyadii ugu dambeeyay udhaceen sidan.
23/12/16 Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar waxay ciidanka cadawgu ku xidh xidheen dad aad ubadan waxaana magiciisa helay ninka lagu magacaabo Axmad Nuur. 24/12/16 Dagmada dhuxun iyo tuulada Barmiil waxay ciidanka wayaanuhu ku xereeyeen 6 geel oo dadka deegaanku ay lahaayeen waxaana kamid ahaa raga geela lahaa
1 daahir aadan oo 2 geel lahaa
2 daahir maxamad shiil oo 1 geel lahaa waxaana geelasha loo xareeyay in ay bixiyaan Gibir ama baad.
25/12/16 Dagmada Dhagaxbuur waxay ciidanka wayaanuhu ku dhaceen 2 baabuur oo uraraa ganacsato ree Qabridahare ah. 26/12/16 Dagmada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle waxay ciidanka wayaanuhu ku xidheen nin shacab ah oo lagu magacaabo Maxamad Cabdiwahaab oo dhakhtar ahaa. 27/12/16 Dagmada Goday waxaa lagu xidhay dadka kala ah cabdulaahi xassan iyo idiris yuusuf.